Fialan-tsasatry ny fahavaratra Travel Vacations Travel | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Fialan-tsasatry ny fahavaratra Fialan-tsasatra ny dia
Ataovy fotoana fialan-tsasatra ny fialantsasatry ny lohataona
Aza hadinoina ny fianarana
Ny fialam-boly tsy tokony hohadinoina
Mitazona fifandraisana amin'ireo namana ao an-tsekoly mandritra ny fialantsasatra
Tonga ny fialantsasatra amin'ny lohataona. Izany no mahatonga ny mpianatra tsirairay hikoriana haingana kokoa, satria malaza be ny vakansy mandritra ny fialantsasatra, satria fotoana mahafinaritra ho an'ny ankizy maro ity andro lava ity. Raha ny marina, vakansy mandritra ny fahavaratra ny fanaovana drafitra amin'ny zavatra isan-karazany atao.
Inona no tokony hatao amin'ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra
Raha ny herinandro mandritra ny fialantsasatra mandritra ny herinandro maromaro, dia misy fotoana ampy handehanana mivezivezy na haka fialan-tsasatra any amin'ny tanàna na firenena hafa. Misy fomba maro hanaovana ny fialan-tsasatra mandritra ny fotoana manokana.
Fialan-tsasatra mandritra ny faran'ny herinandro
Ny ray aman-dreny dia afaka manampy zavatra maro samihafa mba hanampiana azy hanamboatra izany vanim-potoana izany. Ny taranaka dia miandrandra an'io fety manokana io isan-taona. Noho izany antony izany, ny ray aman-dreny dia afaka mampifaly ny zanany rehefa mahazo antoka fa ny fialan-tsasatry ny ankizy dia lasa fotoana tsy hay hadinoina.
Ny fialantsasatry ny fahavaratra dia singa manokana ho an'ny ankizy
Ny fiandrasana ny fialantsasatra amin'ny lohataona dia manomboka amin'ny mpianatra maro herinandro vitsy mialoha ny fialantsasatra amin'izao fotoana izao, satria ho an'ny ankizy, fotoana fohy ireny fialan-tsasatra ireny. Voalohany aloha, ny fialan-tsasatra lava dia midika ho an'ny ankizy fa tsy mila mandeha any an-tsekoly izy ireo ary afaka manana fotoana mety hatoriana ela be na hiari-tory amin'ny hariva.
Mandritra ny fialantsasatry ny lohataona, ny ankizy dia afaka manadino ny adin-tsain'ny ankizy mandritra ny fotoana fohy, satria mandritra ny fialantsasatra dia misy fotoana ahafahana miala amin'ny sekoly sy ny adin-tsaina. Mazava ho azy, mazava ho azy, ny fanontaniana dia mitranga amin'ny fomba azo atao hanaovana fialantsasatra mandritra ny vanim-potoana manokana. Misy fomba maro hanatrarana io tanjona io.
Afaka manao be mandritra ny fialan-tsasatra ny ankizy. Ny vanim-potoana mafana dia mamela zavatra maro. Ohatra, afaka mivoaka any ivelany ny ankizy mba hilalao ao. Ankizy maro no mampiasa ny fialantsasatry ny lohataona mba hialany amin'ny fialamboliny. Ankoatr'izay, ny fialantsasatra dia manome ny fotoana ilaina hanombohana fialamboly vaovao.
Ny fanatanjahantena koa dia fahafahana lehibe ho an'ny ankizy maro mandritra ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra. Ny fianakaviana ihany koa dia afaka mampiasa ny fialantsasatry ny lohataona hanao fitsangatsanganana any amin'ny toerana samihafa, mba hampiasana tsara ny fotoan'ny fialantsasatra, satria miaraka amin'ny fianakaviana ny mpianakavy rehetra afaka manana fahafinaretana betsaka.
Ampiasao ny toetr'andro mamirapiratra mandritra ny dia amin'ny fianakaviana
Amin'ny fahavaratra, noho ny toetrandro tsara, matetika dia azo atao ny mitsidika ny fianakaviana iray manontolo, izay ahafahan'ny fianakaviana mahazo fahafinaretana. Ny fialan-tsasatra amin'ny lohataona dia azo ampiasaina handrafetana fitsangatsanganana samihafa, satria ny fialan-tsasatra dia mety ho lasa sangisangy raha tsy misy drafitra momba ny asa atao mandritra ny fialantsasatra.
Ny fialantsasatry ny lohataona dia ahitana herinandro maro izay ahafahan'ny fianakaviana manao dia lavitra any amin'ny toerana samihafa. Ohatra, misy ny fahafahana mitsidika toeram-pijeremanana iray, mandehana any amin'ny dobo filomanosana, mandany fotoana any ivelany na mikasa ny hitsidika valan-javaboary. Noho izany dia maro ireo fitsangatsanganana mety hodiavin'ny fianakaviana mandritra ny fialantsasatry ny fahavaratra. Ankoatra ny fitsangatsanganana andro, ny fialantsasatra mandritra ny fahavaratra dia tsara koa ho an'ny andro fialantsasatra, izay ahafahan'ny fianakaviana iray manontolo miala sasatra.
Fianakaviana maro no mampiasa ny fialantsasatry ny lohataona mba hialana sasatra Tokony hisy fialan-tsasatra hatao amin'ny fialan-tsasatra, dia antony iray tena miavaka ho an'ny fifaliana ho an'ny ankizy izany, satria matetika no misy ifandraisany amin'ny traikefa isan-karazany ny fialantsasatra.
Ny fialantsasatry ny fianakaviana mandritra ny fialan-tsasatra amin'ny fahavaratra dia tena zava-dehibe ho an'ny ankamaroan'ny ankizy satria afaka manao zavatra maro izy mandritra ny fialantsasatra. Ohatra, afaka mandany fotoana any amin'ny dobo filomanosana ny zanaka. Fa ny fialantsasatra ihany koa dia azo ampiasaina mba hanao fitsangatsanganana, satria any amin'ny firenena vahiny, misy toerana maro azon'ny fianakaviana tsidihina.
Mazava ho azy fa misy ihany koa fianakaviana izay noho ny antony isan-karazany mandritra ny fialantsasatry ny fahavaratra dia tsy afaka manao fialan-tsasatra ary fitsangantsanganana vitsivitsy monja. Amin'io tranga io dia afaka mampiasa ny fotoana hianarana ny zanaka mba ho voaomana tsara ny fanombohan'ny sekoly aorian'ny fialan-tsasatra.
Ny fialan-tsasatry ny lohataona dia maharitra ela. Koa satria mety hitranga haingana dia manadino ny fitaovam-pianarana ireo ankizy ary noho izany dia manana olana rehefa manomboka indray ny fianarana aorian'ny fialan-tsasatra.
Fialan-tsasatry ny fianakaviana mandritra ny fialantsasatry ny fahavaratra
Mazava ho azy fa tsy ratsy ho an'ny zaza ny mianatra zavatra mandritra ny fialan-tsasatra amin'ny fahavaratra, ka ny zavatra izay ianaran'ny ankizy mandritra ny lesona dia tsy hadino. Noho izany dia tokony amporisihan'ny ankizy ny bokim-pianakaviana indraindray mba hamaky ny fialantsasatra.
Ny ray aman-dreny dia manana fahafahana hanampy ny zanany amin'ny fanampiana azy ireo hianatra amin'ny fialantsasatra. Na izany aza, ny fialan-tsasatra dia fialan-tsasatra amin'ny fotoam-pianarana. Noho izany, ny fialam-boly amin'ny andro fialan-tsasatra dia tokony tsy atao tsinontsinoavina. Raha ny marina, ny olona tsirairay mandritra ny androm-piainany dia maka fotoana vitsivitsy mba hankafy fialantsasatra amin'ny fahavaratra.
Misy fomba maro ahafahana mampihomehy ny andro fialan-tsasatra amin'ny taranaka. Tsy voatery haka andro fitsangantsanganana na fialan-tsasatra mba hanomezana fahafinaretana ny ankizy mandritra ny fialantsasatra.
Afaka miara-miasa ao an-trano ihany koa ny fianakaviana amin'ny fiaraha-miasa izay azo ampiasaina hanamboarana ilay fialantsasatra.
Ohatra, ny ray aman-dreny dia afaka milalao lalao amin'ny zanany mandritra ny fialantsasatra. Maro ny fianakaviana mampiasa vakansy mandritra ny fialantsasatra mba handany fotoana. Ny ankizy koa dia manana fahafahana hihaona amin'ny namanao any an-tsekoly mandritra ny fialantsasatra.
Ny ankizy tsirairay dia manana drafitra tena miavaka amin'ny fialantsasatry ny fahavaratra. Noho izany dia mety hitranga izany fa ny mpiara-mianatra dia tsy mahazo mifankahazo mandritra ny fialantsasatra. Ankizy maro no manisy lanja lehibe ny mahita ny namany mandritra ny fialantsasatra. Indrindra mandritra ny fialan-tsasatra mandritra ny fahavaratra, dia mety ho tian'ny ankizy ny namany any an-tsekoly.
Raha mitranga izany, dia misy ny fotoana ahafahan'ny ankizy mandamina fotoana iray hilalao, satria mazava ho azy, ny mpiara-mianatra koa dia afaka mifankahita mandritra ny fialantsasatra ary mandany fotoana miaraka.
Na inona na inona zavatra kasaina hatao mandritra ny fialantsasatry ny lohataona, ny ray aman-dreny dia afaka manampy ny taranany hanao fety ho fotoana mahafinaritra amin'ny famelana ny zanany ho zazakely mandritra ny fialan-tsasatra.
Fety amin'ny Krismasy | Fialan-tsasatra mandeha
Fialantsasatra eny an-tendrombohitra Fialan-tsasatra mandeha
Fialan-tsasatry ny ranomasina | Fialan-tsasatra mandeha
Camping | Holiday holidays
Ao amin'ny vala famelombelomana miaraka amin'ny fianakaviana | Holiday holidays
Fialan-tsasatra amin'ny ray aman-dreny | Holiday Holiday Wellness
Caribbean | Travel vacations
Travel in Europe | fialan-tsasatra
Miara-misakafo amin'ny fiara sy ny fianakaviana
Famangiana bisikileta miaraka amin'ny fianakaviana | fialan-tsasatra
Mandeha miaraka amin'ny fianakaviana | fialan-tsasatra